Ny Tourist Journey dia namoaka ny sehatra fitsangatsanganana manokana voalohany eran-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Ny Tourist Journey dia namoaka ny sehatra fitsangatsanganana manokana voalohany eran-tany
Satria ny indostrian'ny fitsangatsanganana dia nianatra ny fomba sarotra momba ny areti-mifindra Covid-19, ny fahafaha-manao dia tena ilaina amin'ny fahavelomana amin'ny vanim-potoanan'ny areti-mifindra. Angamba tsy nisy sehatra nisedra korontana toy ny indostrian'ny fizahan-tany manerantany, araka ny fanaporofoan'ny orinasa ao ambadiky ny Tourist Israel, orinasam-pizahantany an-tserasera voalohany ao Israely. Ho setrin'ny fanakatonana tanteraka an'i Isiraely amin'ny fizahan-tany, ny orinasa dia nifantoka tamin'ny tontolo hafa. Ankehitriny dia nanangana orinasa hafa manova lalao izay mampiasa ny teknolojia hamoronana vokatra fitsangatsanganana manerantany. Fitsangatsanganana mpizahatany dia sehatra fitsangatsanganana teknolojia avo lenta izay manolotra fitsangatsanganana isan'andro, fonosana andro maromaro, ary hotely natao hanomezana ny mpandeha mahay manavaka ny tsara indrindra amin'ny zavatra atolony. Miaraka amin'ny lisitr'ireo firenena 20 sy mitombo, ny mpandeha dia afaka mahita fitsangatsanganana sy traikefa tena tsara tarihin'ireo mpitari-dalana tena ao an-toerana, natokana hanomezana ny mpitsidika ny fihaonana akaiky amin'ny fireneny. Ny Tourist Journey dia mazoto manome zavatra mihoatra noho ny traikefan'ny mpizahatany mahazatra, ary ny atolony dia tena taratry izany.
"Nanomboka ny Tourist Journey izahay mba hanao zavatra hafa," hoy i Ben Julius, mpanorina ny Tourist Journey. “Tsy misy tahaka izao. Be dia be ny Google ary nandany fotoana be, ary tsy takatry ny ankamaroan'ny mpivezivezy ny zavatra tadiavinay amin'ny maha mpandeha azy – ary raha nanao izany izy ireo dia tonga tamin'ny vidiny lafo. Noho izany dia nanangana ny vahaolana amin'ny olana izahay. Ny laharam-pahamehanay dia ny manolotra traikefa tsara indrindra, vokatra azo itokisana ary serivisy tsy manam-paharoa amin'ny vidiny mahagaga. Aminay, ny haitraitra vaovao dia midika ho an'ny tena manokana, namboarina ary tena izy. Miaraka amin'ny Tourist Journey, ny fanamboarana manokana sy ny maha-azo itokiana avo lenta dia tsy mila miaraka amin'ny vidiny lafo.
Miaraka amin'ny fifantenana ny fitsangatsanganana sy ny fonosana, ny Tourist Journey dia nampiditra endri-javatra vaovao manaitra, Create my Journey to create fonosana fitetezam-paritra namboarina. Ity fitaovana fanovana lalao ity, teknolojia fitsangatsanganana voalohany, dia mamela ny olona rehetra hifehy ny diany manokana feno miaraka amin'ny trano fandraisam-bahiny, fitsangatsanganana, traikefa ary fitaterana. Rehefa avy mamaly andian-dahatsoratra momba ny toerana halehany, ny halavan'ny diany, ny zavatra mahaliana azy, ny traikefa iriany, ary ny fomba fandehanana, ny Create my Journey dia mamorona zotram-pandehanana feno ao anatin'ny 3 minitra, izay azon'ny mpandeha atao ovaina, zaraina ary vakiana avy hatrany. Mampifangaro algorithm saro-takarina miaraka amin'ny lisitry ny mpiara-miombon'antoka ara-pizahantany sy fandraisana vahiny manerana an'izao tontolo izao, ny My Journey dia manamora dingana iray izay mazàna mitaky ny fandraisana mpiasan'ny fitsangatsanganana mahazatra na mandritra ny ora maro hanaovana fikarohana sy drafitra mahaleo tena, ho dingana iray haingana, mahafinaritra ary mora. Ohatra, mpankafy tantara tia divay izay te hahita a package tour in Italy mandritra ny efatra andro dia mety hiteraka fitsangatsanganana mahazatra izay mitondra azy ireo amin'ny fitsangatsanganana divay, fanandramana ary fitsangatsanganana an-tanàn-dehibe manasongadina vatosoa manan-tantara, miaraka amin'ireo safidy hotely tsara indrindra isaky ny toerana haleha. Ny Create my Journey dia miavaka amin'ny fahaizany mampiasa teknolojia nefa mitazona fahatsapana manokana, satria ny fitsidihana sy ny traikefa tsirairay dia nofantenana sy nohamarinin'ny manam-pahaizana momba ny dia an'ny Tourist Journey. Ny famelana ny mpandeha hamandrihana lafin-javatra maro amin'ny diany ao anatin'ny minitra dia miantoka ny traikefa mirindra sy milamina ary tsy misy adin-tsaina. Mbola vao maraina ny lalao, saingy efa azo antoka ny filazana fa ny Tourist Journey dia mizotra ho lasa mpilalao fototra amin'ny ho avin'ny dia sy ny fizahantany.